Nicholas Kay oo Soo Dhaweeyay Caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland – Radio Daljir
Seteembar 14, 2015 7:52 b 0
Isniin, September 14, 2015 (Daljir) —Wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsana arrimaha Soomaaliya Danjire Nickolas Kay ayaa siweyn usoo dhoweeyey caleemasaarkii madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dhowaan kadhacay magaalada Kismaayo.
Danjire Nickolas Kay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay caleemo Saarka Sida Madaxweyne loo caleemo saaray Axmed Maxamed Islaam Madoobe, markii xaflad ay ka dhacday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
“Waxaan u hambalyeynayaa madaxweyne Madoobe qaabkii ay doorashada u dhacday, Qaramada Midoobay waxay sii wadi doontaa taageerada dhismaha maamulka Jubbaland si jiilka cusub mustaqbal u helaan”ayuu yiri Nickolas Kay.
Dhanka kalena wakiilka Xoghayaha guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in wax wanaagsan ay aheyd dhaqan gelinta hishiiskii sanadkii 2013 ka dhacay magaalada Addis Ababa oo ay wada gaareen dowlada Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubba.
Ugu dambayntiina madaxweynaha Jubbaland ayuu ku dhiiri geliyay in maamulkiisa uu ka shaqeeyo sidii loo qancin lahaa dadka kasoo horjeeda Jubbaland, wuxuuna soo dhaweeyay kordhinta xubnaha baarlamaanka maamulka Jubba, oo uu dhowaan madaxweyne Axmed Madoobe sameeyey.